မေမေတို့ ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်တတ်စေဖို့ သင်ပေးထားသင့်တဲ့အရာ (၅)ခု - Chit MayMay
Home Parent Guide မေမေတို့ ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်တတ်စေဖို့ သင်ပေးထားသင့်တဲ့အရာ (၅)ခု
မေမေတို့ ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်တတ်စေဖို့ သင်ပေးထားသင့်တဲ့အရာ (၅)ခု
ကျွန်မတို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကလေးတွေဟာ လူကြီးမိဘပြောစကားကို နားထောင်ရမယ်၊ မိဘဆုံးဖြတ်တာကို လိုက်နာရမယ်၊ ကလေးကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် မပေးတာ စတဲ့ ရှေးရိုးစွဲတွေကြောင့် ကလေးတွေဟာ မိဘအပေါ်အရမ်းမှီခိုလွန်းပြီး ကိစ္စတစ်ခုခုဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက်မချတတ်တာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာ၊ မိဘတွေ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မယုံကြည်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
မိဘမပါဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မဝင့်ရဲတဲ့ကလေးဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ၊လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တပါးသူဆီက အကူအညီတောင်းရတာ၊ တစ်ခုခုဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲရဲမချရဲတာ စသဖြင့် အကျင့်ပါသွားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Self-confident မရှိတာကြောင့် ဘဝမှာ၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်တော့ပါဘူး။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ပေးထားတဲ့ကလေးဟာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဘဝအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတတ်စေဖို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပျိုးထောင်ပေးသင့်တာကြောင့် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေ ဘယ်လိုချမှတ်ရမလဲဆိုတာ သိတဲ့ကလေးတွေဟာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခြင်း skill ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဟာ တာဝန်ယူမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေ မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် သေချာပေါက် အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(autonomous )ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဘယ်လိုချမှတ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ ကလေးတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ autonomous ဆိုတာ ဘာလဲ? ဒါက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်ပြီး၊ ပြင်ပက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်စွမ်းကို ခေါ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ ကလေးကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေဟာ ပြဿနာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းတတ်လာမယ်၊ စီမံခန့်ခွဲတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ကလေးဟာ အကူအညီမလိုဘဲ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သူတွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူလည်း ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရည်အသွေးတွေက သူ့ဘာသာ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို မိဘတွေက နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သင်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ သူတို့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု (self-esteem)၊ နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု (Self-confidence) တွေ ရှိလာပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရတဲ့အခါ အမှားလုပ်မိမှာကို သိပ်မကြောက်တော့ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့မှာ ဘာက အကောင်းဆုံးလဲ?၊ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဆိုတာ အကဲဖြတ်ဖို့ ပိုပြီးဆန္ဒရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်တတ်စေဖို့ ကလေးကို သင်ကြားပေးဖို့အတွက် သော့ချက်များ
ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ဖို့ သင်ပေးတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ချင့်ချိန်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၈နှစ်ကလေး နားလည်မယ့်စကားကို ၃နှစ်ကလေးကို သွားပြောလို့ မရပါဘူး။ အလားတူပဲ သူတို့ကို ဥပမာကောင်းလေးတွေပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မိဘတွေ ကလေးကို သင်ပေးတဲ့အခါ အသုံးပြုလို့ရမယ့် အသုံးအများဆုံး tools အချို့ကတော့
၁။ ကလေးကို လုပ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် responsibilities ပေးပါ
သူတို့အသက်အရွယ်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ပေါ်မှုတည်ပြီး ကလေးကို တချို့တာဝန်လေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သူတို့ကို အပြင်သွားဖို့ ဘယ်အဝတ်အစား ဝတ်ရမယ်ဆိုတုတာ ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာ၊ အရုပ်တွေကို ဖယ်ရှားခိုင်းတာ၊ အိပ်ရာကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြုလုပ်ခိုင်းတာ စသဖြင့် တာဝန်လေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကလေးကို သူ့ဘာသာ လုပ်ခွင့်ပေးတာ
လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို သင့်ကလေးအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းပြပြီးတာနဲ့ သူတို့ကို တစ်ယောက်တည်း ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ မိဘအနေနဲ့ ဘေးက သင့်တော်တဲ့ ကြီးကြပ်မှု ပေးဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် သူတို့ကို စမ်းသပ်မှုကို နေရာပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သူတို့က ကူညီဖို့အတွက် အကူအညီတောင်းရင် သို့မဟုတ် သူတို့ဘာသာ သူတို့ မစီမံနိုင်တော့မှ အကူအညီပေးပါ။ ဥပမာ- အရုပ်အသစ်တစ်ရုပ် ဝယ်လာတယ်ဆိုပါစို့ ဒီအရုပ်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ သူ့တို့ကို ရှာဖွေခိုင်းပါ။
၃။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ပြောတတ်စေဖို့ အားပေးပါ
စကားပြောဖို့ သင်ယူနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူတို့ကို ဘယ်လို တောင်းဆိုရမလဲဆိုတာ သင်ပေးလို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- သူတို့ရေဆာရင် Water လို့ ပြောဖို့ သင်ပေးတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူ သူတို့ဟာ အိမ်သာသွားဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ (သို့) နာကျင်မှု ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ဖော်ပြဖို့ သင်ပေးရပါမယ်။ သူတို့လိုချင်တာတစ်ခုခုရှိတဲ့အခါ သူတို့ဘာသာသူတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တိတိကျကျ ဖော်ပြတတ်စေဖို့ ကလေးကို အားပေးခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ ဘာသာစကား skill ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး သူတို့ကို သင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး တစ်ခုခုကို အကြိမ်များစွာ မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါမေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ကလေးတွေဟာ တချို့စဉ်းမျဉ်းတွေ စံချိန်စံညွန်းတွေကနေ ကင်းလွတ်တယ်လို့မဆိုလိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဥပမာ= သင့်ကလေးက သွားမယ့်နေရာနဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ သင့်လျှော်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘယ်အဝတ်အစား ဝတ်ရမလဲဆိုတာ ရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေက ဘာစားရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမြဲတမ်း ရွေးချယ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘကဘဲ ကလေး ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ/မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သင့်တော်တဲ့ အာဟာရတွေကို ထောက်ပံ့ပေးရပါမယ်။
၅။ စဉ်းစားဖို့ သူတို့ကို Challenge လုပ်ပေးပါ
ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့ သင်ပေးတဲ့အခါမှာ ကစားချိန်က အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ- လက်တစ်ဖက်စီမှာ မတူတဲ့ကစားစရာတစ်ခုကို ယူနိုင်ပြီး သူတို့ကောင်းကောင်းနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့ သင့်ကလေးကို တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
“သား ဘယ်တစ်ခုကို ပိုကြိုက်သလဲ?” (or) “ဘယ်တစ်ခုက အကောင်းဆုံးလို့ သားထင်သလဲ? “စတဲ့မေးခွန်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တွေးဖို့ ကလေးကို motivate(လှုံ့ဆော်မှု) လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က သင်မျှော်လင့်ထားသလို မဟုတ်ခဲ့ရင် ၊ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်က မှားယွင်းလျှင် အမှားကို ပြင်ပေးဖို့ အလျင်စလို မလုပ်ပါနဲ့။ ပထမဆုံး သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကို ရှင်းပြပေးရပါမယ်။
ဒါက အမှားနဲ့ စမ်းသပ်ခြင်းရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရပေးပါ။ တိုးတတ်စေဖို့နဲ့ သင်ယူဖို့အတွက် ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုမျှဝေရမယ်။ဘယ်လိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Previous articleသိပ္ပံပညာအရ မြေးထိန်းတဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေက ပိုပြီးအသက်ရှည်တယ်လို့ဆို
Next articleမောင်နှမချင်း ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်ကို မိဘတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သင့်လဲ